Studio 7 Headlines, Wednesday, March 9, 2016
Former prime minister and Movement for Democratic Change leader, Morgan Tsvangirai joined the Dzamara family and thousands of politicians, civil society activists and ordinary Zimbabweans in commemorating a year after pro-democracy activists, Itai Dzamara of the Occupy Africa Unity Square project was abducted by unknown assailants.
The United States says it remains deeply concerned about Dzamara’s whereabouts and wellbeing, noting Zimbabwe should fully investigate cases of politically-motivated violence and abductions to ensure that perpetrators are prosecuted and victims receive justice.
A recent research shows that Zimbabwe has not been adequately responding to urban-to-rural migration resulting in the continued marginalization of women regarding access to housing and other services.
In the Diaspora Forum, this evening we are featuring a Zimbabwean living in New Zealand who is operating a courier company.
And former Zimbabwean goalkeeper Japhet Muparutsa launches a book about his life.
Today on LiveTalk our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners and experts about the disappeared political activist Itai Dzamara. Thousands of people today staged a peaceful march in Harare demanding justice for the leader of Occupy Africa Unity Square, which wants President Robert Mugabe to step down claiming that he has ruined Zimbabwe.